Ciidamada Ahlu Sunna iyo Alshabaab oo ku dagaalamay Galgaduud - Ceelhuur Online
Home > Wararka Galmudug > Ciidamada Ahlu Sunna iyo Alshabaab oo ku dagaalamay Galgaduud
Ciidamada Ahlu Sunna iyo Alshabaab oo ku dagaalamay Galgaduud
November 16, 2018 admin645
Ciidamada Ahlu Sunna ayaa saaka aroortii weerar ku qaaday fariisin ciidanka Alshabaab ku lahaayeen deegaanka Goolo goonle oo qiyaastii 80 km koofur uga beegan degmada Guriceel gobolka Galgaduud. ciidanka Alshabaab ayaa xalay saqdhexe soo galay deegaanka kadib markii ay ka war heleen ciidamada Ahlu sunna oo ku wajahnaa deegaankaas.
Dagaalka oo waqti kooban socday ayaa labada ciidan dib u kala sikadeen, waxaana suurtagal ah in dagaalku markale dib u qarxo, khasaaraha dirirtaan ayaa inta la hubo waxaa ku geeriyooday 2 askari, halka dhaawacu intaa ka badan yahay, dagaalkan ayaa waxaa gadaal ka riixaya saraakiil ka tirsan ciidanka Ahlu sunna oo kasoo jeedaa deegaanada koofurta Guriceel.
Goobaha dagaalka ka dhacay ayaa ahaa goobo aysan maamulin labada urur, dagaalada nuucaan ah ayaa dhibaato kasoo gaartaa inta badan dadka deegaanka oo reer guuraa u badan. labada dhinac oo dagaalku dhexmaray ayeysan jirin cid ka hadashay dagaalkan.
Wasiir Cawad Oo Kulan MuhimAh la Qaatay Dhiggiisa Kenya (Sawirro)
Senator Cabdi Qeybdiid oo loo doortay Guddoomiyaha Guddiga Dastuurka Labada Aqal
Maamulka Gobolka Hiiraan oo hay’adaha samafalka ka dalbaday gurmad deg deg ah
October 24, 2019 Duceysane